सकियो प्रादेशिक महोत्सव – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः २३ माघ २०७४, मंगलवार ०१:१३ February 6, 2018 हातेमालो संवाददाता
नेपालगन्ज। नेपालगन्जमा माघ ११ गतेदेखि जारी प्रादेशिक महोत्सव हिजो सकिएको छ । महोत्सव समापन समारोहमा बोल्दै नेकपा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य एवं प्रदेश नम्बर ५ का प्रस्तावित मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नेपालगन्ज आर्थिक क्षेत्रको हव बन्ने कुरालाई कसैले छेक्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको राजधानीका सवालमा थुप्रै बहस र छलफल भएको भए पनि एउटा ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बन्दैमा अन्य ठाउँमा विकास नरोकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालगन्जलाई प्रदेशको आर्थिक राजधानी बनाउन सकिने बताउदै यतिबेला प्रदेसको राजधानी कहा राख्ने भन्दा पनि प्रदेस नं. ५ को विकासको मोडेल के हुने भन्ने विषयमा अबको बहस केन्द्रीत हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको केन्द्रविन्दु हो, तर पनि प्रदेश राजधानी सम्भव नहुन सक्छ । यहाँका राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी सबैले आर्थिक राजधानीका लागि आवाज उठाउन जरुरी छ ।’
उहाँले विकासको संभावना बोकेको र पूर्वाधार भएका प्रदेश नं. ५ का ३ मुख्य शहरलाई विकासको परियोजना बनाएर अघि बढिनु पर्नेमा जोड दिदै नेपालगन्जलाई आर्थिक राजधानीका रुपमा विकसित गरिने बताउनुभयो । प्रदेश नं. ५ प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पोखरेलले प्रदेश राजधानीका विषयमा भन्दा आर्थिक राजधानीका लागि अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य पोख्रेलले आर्थिक समृद्धिका लागि परियोजनामा आधारित बहस जरुरी रहेको बताउँदै भन्नुभयो,–‘नेपालगन्जलाई मानसरोवर सहित प्रदेश नं. ६ र ७ को ट्रान्जिटका रुपमा रहेकोले यसलाई अझ मझबुत पार्नको लागि यसमा आवश्यक पूर्वधारको विकास गरिनुर्छ । नेपालगन्जले आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई जोड्न सक्छ । यहाँको विकास र योजनालाई जनतासँग जोड्नुपर्छ ।’
प्रदेश नम्बर ५ का भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएका नेता पोख्रेलले भन्नुभयो,– जुन स्थानमा प्रदेशको राजधानी हुन्छ त्यही मात्रै आर्थिक समृद्ध हुन्छ भनेर सोच्न हुदैन ।
पोख्रेलले समृद्ध प्रदेशका लागि प्रदेश नम्बर ५ मा रुपन्देही, दाङ र बाँके गरी ३ शहरलाई महानगरको रुपमा विकास गरिने योजना सार्वजनिक गरे । नेता पोख्रेलले नेपालगन्ज प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ को केन्द्रको रुपमा रहेको बताउँदै ३ वटा प्रदेशलाई लक्षित गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले राज्यले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको बताउनुभयो । लगानीमैत्री वातावरणको खांचो रहेको औल्याउदै ढकालले अब बन्ने सरकारले स्थीरताको वातावारण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोजक नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं मूल आयोजक समितिका संयोजक नन्दलाल बैश्यले महोत्सव उत्साहजनक तरिकाले सम्पन्न भएको बताउनुभयो। सबैले आफ्नै सम्झिएर महोत्सवलाई सहयोग गरेको भन्दै अध्यक्ष बैश्यले धन्यबाद दिनुभएको थियो ।
उहाँले महोत्सवको लक्ष्यलाई पूरा गरि छाड्ने बताउनुभयो । संघका प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले महोत्सवले नेपालगन्जलाई चिनाउन सहयोग गरेको र संघीय नेपालमा नेपालगन्जलाई महत्वपुर्ण स्थानमा पु¥याउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
महोत्सवमा ३ सय २१ स्टल रहेका थिए । ५ लाख बढि दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरीएको महोत्सवबाट १ करोड बढि रकम बचत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
Posted in अर्थ/बजार
उपमहासचिव गौतमलाई नेपालगन्जमा स्वागत सम्मान, व्यवसायी र कर्मचारीको हकहित संरक्षणमा थप क्रियाशिल हुने प्रतिवद्धता